मन्त्रीका नाम प्रचण्डको ‘खल्तीमै’ ! यी हुन् चर्चाका .. – Everest Dainik – News from Nepal
मन्त्रीका नाम प्रचण्डको ‘खल्तीमै’ ! यी हुन् चर्चाका ..
काठमाडौं, साउन ११ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले आफ्ना भागमा परेका मन्त्रीहरूको नाम अझै अनुमोदन गराएको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शका आधारमा मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएको भनिए पनि पार्टीमा औपचारिकता भने दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएपछि मन्त्रीहरूको नाम बिहान बस्ने पार्टी कार्यालयको बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी माओवादीको छ। ‘अध्यक्षले शीर्ष केही नेतासँगको परामर्शका आधारमा मन्त्रीहरूको नाम छनोट गरिसक्नुभएको छ’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई पार्टी बैठकबाट औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ।
माओवादीमा कम्तीमा दुई महिलाले मन्त्रीकै जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग महिला सांसदले गरिरहेका छन्। पार्टीका ८२ सांसदमध्ये २८ जना महिला रहेकाले नौ मन्त्रालयमा दुई मन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। दाहालले भने क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन, जनाधार रहेको स्थानको प्रतिनिधित्व गराउन दुई महिलालाई मन्त्री दिन गाह्रो रहेको बताउँदै आएका छन्,अन्नपूर्णमा खबर छ ।